गण्डकी प्रदेशका लागि कोरोना भाइरस (कोभिड– १९) विरुद्धको ‘कोभिसिल्ड’ खोपको ४० हजार डोज आएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मदन श्रेष्ठले आइतबार भारत सरकारले अनुदानमा दिएको १० लाखमध्ये ४० हजार डोज खोप गण्डकी सरकारलाई हस्तान्तरण गरे ।
केन्द्र सरकारबाट आइतबार साँझ ४० हजार डोज खोप प्राप्त भएको र प्रदेश सरकारको खोप भण्डारमा राखिएको प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका कोल्डचेन अधिकृत हिमलाल सुवेदीले जानकारी दिए ।
‘हामीसँग ९ हजार लिटर राख्ने क्षमता छ । अहिले आएको जम्मा ८० लिटर हो,’ उनले भने, ‘पछि धेरै मात्रामा आउँदा पनि राख्न कुनै समस्या हुँदैन ।’
गण्डकी प्रदेशका लागि खोप लिन पोखराबाट ‘रेफ्रिजेरेटर भ्यान’ शुक्रबार नै काठमाडौं गएको थियो । प्रदेशलाई प्राप्त खोप १७ हजार ३ सय ९६ जनालाई लगाइने प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदविन्दु शर्माले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार पोखरास्थित खोप भण्डारमा राखिएको खोप सोमबारदेखि जिल्लामा पठाउने तयारी छ । प्रदेशभर १० जनालाई खोप लगाउन तालिम दिइएको निर्देशक डा. शर्माले जानकारी दिए । यो खोप १ जनालाई २ डोज लगाउनुपर्छ । ‘४० हजार डोज आए पनि १० प्रतिशत खोप खेर जान सक्ने अनुमान गरेर १७ हजार ३ सय जनाको सूची तयार पारेका हौं,’ निर्देशक शर्माले भने ।